Chishanu, Kukadzi 12, 2016 Local time: 05:30
Nhau / Vanhukadzi
Previous 11 Kukadzi 2016Vasori, Mauto neMapurisa Voyedza Kumisa Masangano Akazvimirira Kuratidzira muHarare
05 Kukadzi 2016VaTsvangirai Vanoti Nhaurirano Hadzisati Dzatanga Pakati peMapato AnopikisaMapato anopikisa anoti nhaurirano dzekuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa pamberi pesarudzo hadzisati dzatanga kunyange hazvo veruzhinji vakatarisira kuti mapato aya abatane sarudzo idzi dzisati dzaitwa.
04 Kukadzi 2016Mapato Anopikisa Obvunzwa Kuti Aripi Achisiya Zanu PF Ichitamburisa VeruzhinjiVeruzhinji vanoti havasi kufara nemashandiro ari kuita mapato ose anopikisa munyika pakatariswa kuoma kuri kuramba kuchiita hupfumi hwenyika.
01 Kukadzi 2016Nyaya yaVaMugabe Yekuti AU Ibude muUN Yokonzera MutauroMutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vakadzoka munyika nemusi weSvondo kubva kumusangano we African Union uko mashoko avo ekuti United Nations Security Council ivandudzwe kana kuti Africa yobuda zvayo okonzera mutauro munyika nekunze.
Harare Residents Trust Yoronga Kusangana naMeya weHarare Pamusoro peKudzuriswa Chibage kweVagariSangano Harare Residents Trust rinoti rine hurongwa hwekusangana nameya weguta reHarare, VaBernard Manyenyeni, pamusoro pemashoko ekuti kanzuru yakati vagari vari kuSt. Martins nenzvimbo dzakapoteredza, vadzure chibage chavo chakarimwa munzvimbo dzisina kuvakirwa
Vaimbove Vashandi veNRZ Voumba Sangano RinovamiririraSangano iri, iro rinonzi Association of Railways Terminated Employees kana kuti ARTE, rine nhengo zana nemakumi matatu pari zvino.